Everybody Read TChen – အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း
တနေ့က စီးတီးမတ်ရောက်တယ် လိုတာလေးတွေသွားဝယ် ညဘက် မုန့်တွေပေါ့ လက်ဘက် ဘာညာ သာရကာ လေ…….
ထုံးစံအတိုင်းရောက်တော့ စာအုပ် ဝင်ကြည့် နည်းနည်း ဝယ်
အဲ့မှာ ဘာတွေ့လဲ ဆိုတော့
စတဲ့ ဟိုမှာတော့ လူငယ်ဘတ် အသက်အရွယ် အကန့်အသတ်နဲ့ပေါ့ ဒါလေးတွေဆို ၈-၁၃ နှစ်ကြား ကလေးစာပေ ခေါ်မယ် ထင်တယ်
ပြီးတော့ စာကြည့်တိုက် စာစဉ် အတွဲ ၁ နဲ့ ၂
အဓိကကတော့ ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်က မာ့ခ် ဇူကာဘတ် တို့ ဘီလ်ဂိတ်တို့ မာသာထရီစာ စသဖြင့်ပေါ့ သူတို့တွေရဲ့ဘိုင်အိုဂရပ်ဖီတွေပေါ့
ကောင်းပါတယ် ဘာသာပြန်လေးတွေ စာကြည့်တိုက် စာစဉ်လေးတွေအနေနဲ့ ထွက်တာ
တို့ဆီမှာကော အဲ့လို ရေးဆရာ လူတွေ မရှိဘူးလား အခု သေတန် မိတဲ့ သူတို့ ကျော်လင်းတို့ ငုံးဥ သည်ကြီး တို့ ရဲ့ဘိုင်အိုဂရပ်ဖီတွေ ရေးကြပါလိမ့် လူငယ်တွေ အဲ့လို မဖြစ်အောင် ပညာယူရအောင်
ဘာကို သွားတွေးမိလဲ ဆိုတော့ ငါတို့ နိုင်ငံမှာကော အဲ့လို တခုတ်တရ စာအုပ်ရေးချင်လောက်စရာ လူမရှိဘူးလား ရှိရင်ကော ဘာလို့ စာရေးဆရာတွေက မရေးနေကြတာလဲ ဘာလို့ ဆူလွယ် နပ်လွယ် လထထ လမမမ ပညခ ၇မ တို့လို ချစ်ကြိုက်ကွဲညား မွဲပြာပုဆိုး ဝတ္ထူတွေပဲ ရေးနေကြတာလဲ
ဟိုးအရင် ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း တို့ စုံထောက်တွေ ဆရာကြီး မောင်ဝံသ ရဲ့ ရှေ့နေကြီး ပယ်ရီ မေဆင် တို့လို မှုခင်း စုံထောက်တွေ ဆိုလဲ အကုန် ဘာသာပြန်
ဆရာသော်တာဆွေလို ဟာသတောင် အမှီး ဆိုတော့ တို့မြန်မာပြည် စာပေလောက နဲ့ အနာဂတ် ကို ရင်လေးစရာတောင် ရှာမတွေ့တော့ဘူး ဟိုးအောက်ဆုံး ရောက်နေလို့
ခုနောက်ပိုင်းဆိုလဲ အရင် အလားအလာ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ မခစစ တို့ ဆိုလဲ သုည လား ဘာလား တို့ဘဝ တို့ကမ္ဘာ ကို မှီးတယ် ဆိုပြီး ရှိတဲ့ အလားအလာ ပျောက်
ပဆလ တို့ဆိုတော့ ဘာသာပြန်အမှီးတောင် မဟုတ်ဘူး မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ တာရာမင်းဝေ တို့ကို တိုက်ရိုက်ကို ခိုးချတာ ဆရာမ မနော်ဟ၇ီ ကလဲ ဘာမှ မပြောဘူးလာ မသိဘူး
ထားတော့ ပြောချင်တာ တို့တွေ မှာ ကလေး စာပေ သိပ်နည်းတယ် အရင် ကို်ယတို့ငယ်ငယ်က ဘတ်ဖူးတဲ့ မိုးသောက်ပန်း တေဇ ရွှေသွေး တို့ကျောင်းသား မင်္ဂလာမောင်မယ် ဆိုလဲ အီစွတ်တွေ လိမ်မာယဉ်းကျေး ပုံပြင်ဆိုလဲ ဇာတ်ကြီး ဆယ်ဘွဲ့ ၅၅ာ ဇာတ်နိပတ်တော် ဇာတက ဒါတွေထဲက ကို မထွက်ဘူး
ဘတ်ကြည့်ရင်လဲ အတင်း လိမ်မာစေချင်တာနဲ့ မထော်မနန်း ယုတ်္တိ မတန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ နဲ့ အတင်း မိဘကျေးဇူး သိခိုင်းတာ ယူမလား ဆရာ ကို ဇွတ် ကိုးကွယ် ခိုင်းတာ ယူမလား ငရဲ နဲ့ ဖြဲ ခြောက်တာ ယူမလား အများစုက ဘူး ရှစ်
အဲ့တော့ အဲ့ကွက်လပ်ကလေး ကို ခရီရေးရှင်း ရှိရှိနဲ့ ရေးမယ့် လူရှိရင် ထုတ်ပေးချင်ပါတယ်
ကိုယ်ပိုင်ရေးတာ ဖြစ်ရမယ် အတင်း သွတ်သွင်း လိမ်မာခိုင်းတာ မဖြစ်ရဘူး
ရှိခဲ့တဲ့ သောက်တလွဲတွေ အမှီးတွေ ထဲ က ခွဲထွက်ပြီး ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ရှိရမယ်
ဟယ်ရီပေါ်တာဆို မဖြစ်နိုင်တာရေးတာပဲ နာမည်ကျော်လွန်းလို့ သူ့ ဝတ္တုဘတ်ဖို့ ဒစ်ရှင်နရီ တောင် သပ်သပ် ထွက်သေးတယ်
အဲ့လို ပညာရှင်မျိုး ဘာလို့ မပေါ်လာပဲ
ပဆလ လို ငါးစိမ်းသည်တပိုင် သူခိုးမ နဲ့ ထမနဇ လို မခစစ လို ပညခ လို
လကရက လို ဆရာဝန် စာရေးဆရာ အများစု လို ဘာသာပြန်ရင် ပြန် မပြန်ရင် ဖာ တွေ ကို ချနင်း ဖာ အကြောင်းရေး ရင် စာရေး ဆရာ ဖြစ် ပေါက် ရောင်းကောင်း တွေပဲ များနေတယ်
Posted on October 16, 2017 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အချဉ်ပေါင်းများLeaveacomment on အချဉ်ပေါင်း (၂)
ကိုယ်က အမြင် တခုခုရေးတယ် ဆိုပါတော့ ဥပမာ နိုင်ငံရေး နဲ့ ပတ်သက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကလေးတွေ အကြောင်း ကျန်းမာရေး တခုခုပေါ့
အဲ့တာကို အောက်နေလာပြီး အတွေးက တူတူပဲ တထပ်ထဲပဲ လာရေးရင် သိပ်အမြင်ကပ်တယ်
နှမ်းဖြူးတယ်လို့ပဲ မြင်တယ် အတွေးတူရင် အစကတည်းက ကိုယ့်ဘာသာ အဲ့အတွေးကို ဖော်ထုတ်လေ မရေးတတ်ဘူး မပြောနဲ့ ကိုယ့်နှမ်းဖြူးတဲ့ ကွန်မန့် ကိုယ်ပြန်ကြည့် ဒါလောက်ပဲ ပြောမယ်
နောက် ခံစားချက်တွေကို ဘလိုင်ကြီး attention ရအောင် တင်တဲ့ သူတွေလဲ အမြင်ကပ်တယ်
Pls no one wanna know or care about your personal life or how heart broken you are, people are just laughing at your back with amusement, that’s all.
နောက်တမျိုးက မဟုတ်တမ်းတရားတွေ ဥပမာ ကိုယ်တွေက သိနေတယ် အခြောက်ကြီး က အခြောက်လေးကို ကြိုက်တယ် အဲ့တာကို ကိုကြီးတွေ ကိုလေးတွေ လုပ်နေတယ်
ပိုဆိုးတာက အပုန်းမတွေက မိန်းမတွေကပဲ သူတို့ကို ကြိုက်သလိုလို မိန်းမနို့တွေကိုပဲ သူတို့ကြိုက်သလိုလို ရေးပြောပြီး ပို့စ် တွေ ရှဲတာ
မိန်းမနို့တွေကို သူတ်ို့ကြိုက်တာကတော့ ဟုတ်တယ် လိုချင်စိတ်နဲ့ ငါလဲ အဲ့လိုကြီးချင်လိုက်တာ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကြိုက်ကြတာ ဒါပဲ
ဤတွင် စောက်ဆရာကြီးလုပ်ကာ စောက်ဖောင်းထုခြင်း အစီအစဉ် အပိုင်း (၁) ပြီးဆုံးပါပြီ ကိုယ်စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာ လန်းဖျာ ယွပိုးထိုးနိုင်ကြပါစေရှန်
Posted on October 16, 2017 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အချဉ်ပေါင်းများLeaveacomment on အချဉ်ပေါင်း (၁)
ငယ်ငယ်တုံးက ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကို မော့ကြည့်ရင် အကြီးကြီး အမြင့်ကြီးလို့ ထင်ရတယ်
တရွေ့ရွေ့တိုက်စားမှု နဲ့အတူ မျောပါသွားတတ်ပေမယ့် အဲ့ဒီ တို့တွေအသက် ၁၇ နှစ် အရွယ်က
ခရစ်စမတ်သစ်ပင်လေးကတော့ ငါ့စိတ်ထဲမှာ အမြစ်နစ်နစ်နဲ့ ပျိုးခဲ့သလို တသက်လုံး ရှင်သန်နေခဲ့တယ်
အဲ့ဒီ နှစ်က အင်္ဂလိပ်စာ
စကားရည်လုပွဲ ဆုပေးပွဲမှာ ငါ့ဘေးနားကနေ နင်တိုးတိုးလေး ပြောခဲ့တာလေ
တလောက ဂီတပွဲတစ်ခု မှာ
နင့်ကို မြင်တော့ ငါထင်ပါတယ်လေ ဒီတခေါက် နင်ငါ့ကို တကယ် နိုင်သွားပြီလို့….. အရွယ်ရောက်လာတဲ့
နင့်ရဲ့ ပုံစံကို မြင်ရတာ သိပ်ဝမ်းသားတာပဲ အချိန်တွေ ဒီလောက်ကြာသွားခဲ့တာတောင် နင်ကတော့
ဘာမှ သိပ်မပြောင်းလဲ ခဲ့ဘူးနော်
ဒါပေမယ့် ငါတို့ မိန်းမတွေကတော့
and Christmas trees are small
The apple tree that
grew for you and me
Posted on December 1, 2016 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ပေးစာများ(letters)Leaveacomment on First of May
Sweet December 1st
Posted on December 1, 2016 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ပေးစာများ(letters)Leaveacomment on အတိတ်
စိတ်ထဲမှာ စကားတခွန်း မပြောဘဲ
မင်းကို တိတ်တခိုး ရင်ခုန်သလိုပေါ့
ဝါးဝါး မှုံမှုံ ဆမ်းလို့
စစ်လား မစစ်လား ကတိတွေဆိုတာလဲ
ခဏတာသာ လင်းပွင့် လှပခဲ့တဲ့
အဆုံးသတ် ကို မျှော်မှန်းလွန်းရင်
ခရီးလမ်းကို မခံစားနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေမယ်
ချစ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မုန်းတာပဲ
ဖြစ်ဖြစ် တကယ်တော့ ကိုယ်တို့ ဘာမှ မပိုင်ပါဘူးလေ
အဲ့တော့ လူတယောက်ကို အဆုံးထိ
ကိုယ့်ကို ဖြတ်တိုက်သွားတာ ကြိုက်တယ်
အနာဂတ် ကို မမျှော်မိတော့
နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၆
Posted on November 11, 2016 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများ, သီချင်း ခံစားမှုများLeaveacomment on ငါ့တယောက်ထဲရဲ့အချစ်သီချင်း
သူစိမ်းဆိုတဲ့ စကားကြားဖူးလား Closer ဆိုတဲ့
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ နာတလီက ဂျူဒ် ကို ကားအက်စီးဒန့် ဖြစ်ပြီးပြီးချင်း မျက်လုံး အပွင့်မှာ
“hello…..stranger” လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်သလိုပေါ့
တခါမှ မမြင်ဘူး မတွေ့ဘူးတဲ့ သူနှစ်ယောက်ကို
နောင်တချိန် လမ်းမှာ ပြန်တွေ့ကြတဲ့ အခါ တယောက်ကို
တယောက် စ နှုတ်ဆက်ဖို့ မဝံ့မရဲ ဖြစ်မှုတွေဟာလဲ လူနှစ်ယောက်ကို သူစိမ်းပြင်ပြင် ဖြစ်စေတတ်တာမျိုးလေ……
အဲ့ဒီ အကြောင်းကို ကဗျာလေးရေးရင် ဒီလိုများ
အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီဆိုရင် ဘာများ ပြောင်းလဲ
Posted on January 29, 2016 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, သီချင်း ခံစားမှုများ1 Comment on သူစိမ်း နဲ့ သူစိမ်းပြင်ပြင်
ပန်းလေးတွေကို ပြောခိုင်းပါ” ……..တဲ့…..
(နီကိုရဲ က သူ့ဝတ္ထု တပုဒ်ထဲမှာ
ရင်နဲ့ မဆန့်တော့တဲ့ ကုိုယ့်အချစ်တွေအကြောင်း
ကိုယ်ကတော့ ရဲရင့်တဲ့ နှင်းဆီထက်
ဖြူလွလွ ဇီဇဝါ ကိုသာ ပို သဘောကျသူပါ
၂၉ ရက် ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆ ခု
Posted on January 29, 2016 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ပန်းဖွဲ့ ကဗျာများLeaveacomment on ချစ်သူ ဇလပ်ဖြူ
တယောက်ထဲ ဖော်ကွာမဲ့ ကျန်နေတယ်
အချစ်ခရီးရဲ့ တဝက်မှာ မင်းချန်နေတာ
ကိုယ်ဒီလို အမှတ်မဲ့ ရေပြာနက်ထဲ
ကြင်နာသူမင်း(ကို) တိုင်တည်ရင်း ရင်မှာငို
ရင်နာရင်း ရင်မှာမင်း ကိုယ်လွမ်းမိ
ဟိုးအဝေးကို ခတ်ပြီး သွားနိုင်ပါ့မလား
ခွာလဲ မေ့ဖို့က အခက်သား
တစ်ဘဝလုံး blue Only blue only blue ……
Posted on January 29, 2016 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, သီချင်း ခံစားမှုများLeaveacomment on Only Blue
ကိုယ့်ကို ခေါ်သွားပါလား ချစ်သူ
နှစ် ၁၀၀ ကျော် တံတားကြီး ဆီကိုပေါ့
နာမည် ဆန်းဆန်း ကျော်ကြားလှတယ်
ထူးဆန်းရိုးရာ နဲ့ ရှမ်းရွာလေးတွေဆီကိုပေါ့
တသွင်သွင်တေး နဲ့ စိမ်းမြမြ အလှ
မြို့ဦး ဘော်ကြို စေတီတော်ကို
တူတူဖူးရင်း ဆုတွေ တောင်းကြမယ်လေ
မြို့ကို တပတ် စက်ဘီးစီးကြတဲ့ခါ
လူသူတွေ နဲ့ ဝေးတဲ့
Posted on January 28, 2016 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများLeaveacomment on ကိုယ့်ကို ခေါ်သွားပါချစ်သူ